Madaxweyne Muuse Biixi oo Safar Maanta ugu Kicitimaya Dalka Itoobiya iyo Arrimaha la filayo inay ka Wada hadlan Madaxweynaha Somaliland iyo Raysal-wasaaraha Itoobiya
Saturday January 13, 2018 - 02:55:54 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa la filaya inuu safarkiisi labaad Maanta oo Sabtiya 13-ka Bishan ugu amba baxo dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya.
Ma jiro war faahfaahsan oo kasoo baxay dhinacyada ay khusayso, hase-yeeshee ilo wareedyo looga qaateen ah, ayaa sheegay in madaxweynuhuu u kicitimo doono dalka Itoobiya, oo ah dal cilaaqaad iyo saaxibtimo la leh somaliland.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa la kulmi doona Raysal wasaaraha Itoobiya iyo madaxda ugu saraysa dalka, waxana la filaya in meeqaam aad u sarreeya lagu soo dhoweyn doono madaxweynaha iyo waftigiisa, arrimaha la filayo in ay labada dhinac ka wada hadli doonan, waxa la sheegay inay Kamid tahay cilaaqadka jaarnimo, sida amniga, xidhiidhka ganacsi iyo iskaashiga wax kastoo labada dal dan u ah.
Si kastaba ha ahaatee todobadkii hore ayey ahayd markii Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu safar laba maalmood qaatay ku tagay dalka jabuuti, halkaasoo lagu soo dhoweeyey Madaxweynaha iyo waftigiisa meeqaam diblumaasiyadeed oo aad u sarreeya. Waxanu Madaxweyne Muuse Biixi noqday madaxweynihii abid Somaliland yeelato ee qaabka meeqaamkiisu sarreeyo loo soo dhoweeyo.